February 2018 - Puntland Mirror Believable Media Website
February 28, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa cuno-qabatayn ku soo rogay hoggaamiye sare oo katirsan maleeshiyada ISIS ee ku sugan Puntland, Soomaaliya, sida Talaadadii ay bayaan ku sheegtay Xafiiska Hantidhowrka ee Ilaalinta Hantida Dibadda. Bayaanka dhexdiisa, Mareykanka ayaa […]
February 28, 2018 Abdi Omar Bile 0
Garowe-(Puntland Mirror) The United States has sanctioned top ISIS leader in Puntland, Somalia, the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) said in a statement on Tuesday. In the statement, the U.S. said it had added Mahad […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamadda Mareykanka ayaa duqeyn ka dhan maleeshiyada Al-Shabaab qaaday, oo ay ku dileen labo dagaalyahan, sida ay bayaan ku sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika. Duqeynta ayaa Isniintii ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) U.S. forces launched an airstrike against Al-Shabab militants, killing two fighters, U.S. Africa Command said a in statement. The airstrike occurred Monday in the town of Jilib, Middle Juba region, according to U.S. […]
February 27, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamadda Puntland ayaa raadinaya maxaabiis katirsanaa Al-Shabaab kuwaasoo ka baxsaday xarun dhaqancelin oo kutaala magaalada Garoowe, sida uu sheegay sargaal. Daahir Maxamed Jaamac, oo ah sargaal katirsan ciidamadda Puntland ayaa warsidaha Puntland u […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dugsiga sare ee Al-xikma oo kuyaala magaalada Garoowe oo ay maalgeliyeen Urdun ayaa maanta oo Talaado ah si rasmi ah loo furay. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ka qeybgalay munaasabadda furitaanka, waxaa […]
February 26, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 katirsan maxaabiis Al-Shabaab ah ayaa ka baxsaday xarun dhaqancelin oo kutaala magaalada Garoowe, sida uu sheegay sargaal katirsan laamaha ammaanka. Sargaalka ayaa intaas ku daray in mid kamid ah baxsadayaasha […]
Garowe-(Puntland Mirror) At least 10 Al-Shabab prisoners escaped from a rehabilitation house in Garowe, security official said. A Puntland security official, who asked not be named, told Puntland Mirror that the prisoners managed to escaped […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid la taliyihiisii arrimaha gudaha iyo dowladdaha hoose, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyadda maanta oo Isniin ah. “Madaxweynaha Puntland oo ku hadlaya afka goleyaasha […]
New York-(Puntland Mirror) Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa si weyn u cambaareeyay weeraradii ka dhacay Muqdisho dabayaaqadii asbuucii hore. Antonio Guterres ayaa bayaan ku sheegay in u tacsi tiiraanyo leh uu u […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in ciidamooda ay ku dileen in ka badan 20 dagaalyahan oo Galmudug ah dagaal shalay galab oo Sabti ahayd ka dhacay duleeedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida [...]
Minneapolis-(Puntland Mirror) Somali born Ilhan Omar has won democratic primary in district 60-B of Minnesota. Ilhan won the Democratic primary for Minnesota state council with 40.95% of the vote, beating out former representative Phyllis Kahn, who held [...]